नेपालमा पठन संस्कृतिको विकासबारे गोष्ठी, कसले के भने ?
फरकधार / माघ २७, २०७५
काठमाडौं– अनलाइन पुस्तक विक्रेता कम्पनी ‘किताब यात्रा’ले शुक्रबार आफ्नो वार्षिकोत्सवको अवसरमा एकदिवसीय गोष्ठी सम्पन्न गर्यो । ‘नेपालमा पठन संस्कृतिः हिजो, आज र भोलि’ विषयक गोष्ठीको उद्घाटन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले गरे ।
गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री ज्ञवालीले नेपालमा पठन संस्कृति समृद्ध हुँदै गए पनि कस्तो पाठक हुर्काउने भन्नेबारे सचेत हुनपर्ने बताए । ‘नाफाकेन्द्रित पठन संस्कृति भयो भने पाठक दिग्भ्रमित हुन्छन्,’ ज्ञवालीले भने, ‘पठन संस्कृति निर्माण गर्ने भनेको आलोचनात्मक चेत भएका पाठक निर्माण गर्ने हो ।’
कार्यक्रममा आइजिपी सर्वेन्द्रनाथ खनाल, प्राध्यापक डा. अभि सुवेदी, उपन्यासकार बुद्धिसागर र अभिनेत्री ऋचा शर्मासँग रुपेश श्रेष्ठले नेपालमा पठन संस्कृतिबारे संवाद गरेका थिए । संवादमा वक्ताहरुले पुस्तकको सहज पहुँच र चेतना विस्तारसँगै पाठकको संख्या बढ्दै गइरहेको धारणा राखे । पाठकको रुचिमा विविधता थपिएसँगै नेपाली साहित्य पनि समृद्ध हुँदै गएकोमा वक्ताहरु एकमत थिए । विगतको तुलनामा पठन संस्कृति बढिरहे पनि अपेक्षित रुपमा भने निर्माण नभइसकेको प्रति वक्ताहरुको गुनासो थियो ।
‘पढेकालाई सम्मान गर्ने प्रचलन निर्माण गरियो भने मात्र पठन संस्कृति विकास हुनसक्छ,’ प्रहरी आइजिपी खनालले भने । खनालले प्रहरी कार्यालयहरुमा लाइब्रेरी खोलिएको र संगठनमा उच्च तहका हाकिमदेखि जवानमा समेत पढ्ने संस्कृतिको विकास भइरहेको बताए। ‘सुरुवाती दिनमा प्रहरीमा जागिर गर्दा मलाई प्रहरी भनेको दुनियासँग लड्ने, भिड्ने पेसा होला भन्ने लाग्थ्यो,’ खनालले भने, ‘तर, पछि बुझ्दै जाँदा दुनियाँ बुझ्न यहाँ त धेरै पढ्नुपर्ने रहेछ ।’
साहित्यकार बुद्धिसागरले कर्णालीको दुर्गमा भेगमा आफूले पढ्नका लागि गरेको संघर्ष सुनाए । त्यतिवेला र अहिलेको अवस्था फरक रहेको बताउँदै उनले भने, ‘आजभोलि त साथीभाइबीच क्याफे वा कफी सपमा जिम्मा हुँदा पनि बजारमा आएको नयाँ पुस्तकबारे छलफल हुन्छ। यो सकारात्मक पाटो हो ।’
आफ्नो रुचिअनुसारका पुस्तक बजारमा आएकाले पाठक बढ्दै गएको उनले बताए । तर, पाठकहरु पढ्दै गए पनि पठन संस्कृतिको विकासमा भने केही समय लाग्ने उनको बुझाइ छ ।
नायिका शर्माले हिजो छोरीहरुले कोर्सबाहेकका पुस्तक पढ्यो भने पोइल जान्छे भन्ने संस्कार रहेको र आजसम्म आइपुग्दा बाबुआमाले नै छोरीलाई पढ्न प्रेरित गरेको प्रसंग उठाइन् । आफूले बजारमा आएका प्रायजसो पुस्तक पढेको बताउँदै शर्माले कलाकारले समाज, परिवेश र सन्दर्भ बुझ्नका लागि धेरैभन्दा धेरै पढ्नुपर्ने बताइन् ।
प्राडा सुवेदीले पछिल्लो समय पुस्तक र साइबर संस्कारबीच द्वन्द्व रहेको उल्लेख गरे । उनले भने, ‘हिजोभन्दा आज पुस्तक पढ्ने अझ किनेरै पढ्ने जमात बढेको छ । तर, साइबर संसारप्रति युवाहरुको आकर्षण बढेकाले यसले भविष्यमा कस्तो असर पार्छ भन्ने कुरामा पनि विमर्ष हुनु आवश्यक छ ।’
त्यस्तै, बुक हिल प्रकाशनका अध्यक्ष भूपेन्द्र खड्काले किताब यात्राजस्ता संस्थाले किताबको बजार प्रवर्द्धन गर्न सकारात्मक योगदान गरेकोमा धन्यवाद दिए । किताब यात्राका प्रमुख ऋषिराम अधिकारीले एक वर्षमै किताब बजारमा आफूहरुलाई स्थापित गर्न मद्दत गर्ने पाठक, लेखक, प्रकाशन गृह, सहयोगीहरु सबैलाई धन्यवाद दिए ।